Ny trano kely dia mirona amin'ny fomba fiaina vaovao sy maoderina ho an'ireo fanofana kely ireo. Na eo aza ny toerana kely, lalantsara tery, sy efitrano kely, mbola misy fomba fiasa vitsivitsy hampamirapiratra azy, lehibe kokoa, ary tsara tarehy kokoa. Ho an'ny fetra malalaka, tsy maintsy afangaro tsara ny fanaka amin'ny endrika anatiny, amin'ny…
Inona no fandriana fividiananay matetika ny efitrano fandraisam-bahiny? Ny valiny dia lamba, hoditra, na olon-kafa, izay safidy mialoha ho an'ny ankamaroan'ny fianakaviana. Fa efa renao ve ireo sofa tsy azo ovaina? Eny, Toa hafahafa kely sy tsy mahazatra an'ny ankamaroan'ny olona izany. Ny sofa azo volena dia misy PVC, ary tsindrio ny fikorianan'ny gazy ao amin'ny vatana.…
Betsaka ny karazana sofa isan-karazany ka sarotra ny misafidy raha hifindra trano vaovao ianao na hanolo ilay taloha. Fa mino aho fa izany dia iray amin'ireo zavatra mampientanentana indrindra hisafidianana sombin'arivony maro. Izay no antony manapahako hevitra hanoratra ity lahatsoratra ity. Ny zavatra iray tiako dia ny mandeha manodidina ny fanaka…
Topy maso Ny haingon-trano malefaka ao amin'ny hotely dia fanahin'ny hotely iray manontolo. Ny famolavolana tsara ny haingon-trano malefaka dia afaka mandray anjara amin'ny fanatsarana ny vokany amin'ny lafiny iray. Ny mpanamboatra fanao any amin'ny hotely Baotian Furniture dia milaza aminao momba ny famolavolana haingon-trano fandraisam-bahiny, Mifanaraka amin'ny fanaka malefaka. Ny voalohany dia ny fisafidianana fanaka amin'ny hotely…
Paikady hividianana fomba manokana amin'ny sofa hotely
Tsy maintsy nijanona tao amin'ny hotely ivelany izahay. Mahatsapa ve isika fa tsy mitovy amin'ny sofa ao an-tranontsika ny sofa?? Raha te hividy sofa ao amin'ny hotely ianao, ahoana no tokony hisafidiananao azy? Nametraka fanontaniana toy izany ny mpiserasera sasany. Ny sofa hotely dia vokatra tsy mahazatra. Ho an'ny sofa manokana, tsy dia mifanentana amin'ny famokarana andiany mahazatra…
Mandritra izany fotoana izany dia nohatsaraina fatratra ny fari-pirenena, io koa dia mametraka fepetra ambony sy avo kokoa amin'ny kalitaon'ny hotely sy serivisy. Ary noho izany, rehefa mifantina fanaka trano fandraisam-bahiny, ny trano fandraisam-bahiny lehibe dia mitandrina kokoa amin'ny fampiharana, Beauty, Ampionòny, pitsopitsony sy lafiny hafa, ary mametraka fepetra takiana ambonimbony kokoa ho an'ireo orinasan-trano fandraisam-bahiny. Miaraka amin'ny hatsarany mamorona sy ny vokatra fanaka avo lenta,…
Inona no atao hoe torimaso mahasalama?
Ny fomba fatoriana salama dia manome antoka fa ny ampitso dia feno angovo esp ho an'ny olon-dehibe miasa sy ny mpianatra mavesatra entana. Ny fidiovana amin'ny torimaso dia hetsika mahazatra manampy antsika hatory ary hitandrina torimaso mahasalama. Ny fahadiovan'ny torimaso ratsy dia mety manakana ny kalitaon'ny torimaso. Heverina ho toy izany ny ankamaroan'ny olona tsy manana torimaso mahasalama, antenaina fa misy toro-hevitra kely etsy ambany ilain'izy ireo alohan'ny hatory.…